Ndị ọzọ kachasị mma maka Excel | Nzukọ Ekwentị
Ihe kacha mma Excel n'efu
Ụlọ Ignatius | | Microsoft Excel, Mmemme
Office abụrụla nke aka ya ụlọ kacha mma nke ngwa ngwa Lookingchọ ndị ọzọ abụghị ọrụ dị mfe, ọ bụrụhaala na mkpa anyị abụghị ihe mgbagwoju anya gabigara, kemgbe ahụ ọ bụrụ na anyị nwere ike ichefu ịchọ ngwa ndị ọzọ, m wee kwuo nke a site na ịmara nke bụ eziokwu.
Agbanyeghị, maka ndị ọrụ ụlọ, ndị ọrụ na-emepụta akwụkwọ Okwu, akwụkwọ ma ọ bụ akwụkwọ ngosipụta oge ụfọdụ, anyị nwere ọtụtụ ndị ọzọ. N'isiokwu a, anyị ga-elekwasị anya n'inye gị nhọrọ kachasị mma na Excel, uzo ozo zuru oke.
2 Excel site na ihe nchọgharị
3 Akwụkwọ ozi Google
4 Ọnụ Ọgụgụ (Mac)
Mgbe m na-ekwu maka Office, Anaghị m ekwu banyere Microsoft Office ma ọ bụ Microsft 365Ana m ekwu banyere obere ngwa ebe ị nwere ike ịchọta ụdị nsụgharị nke Office, Okwu na PowerPoint. Ngwa a, nke dịkwa maka ekwentị mkpanaaka, na-enye anyị ohere ịmepụta akwụkwọ ederede dị mfe na-enweghị akwụ ụgwọ maka ikike ma ọ bụ jiri usoro ndenye aha nke Microsoft nyere.
Etu esi ebudata Microsoft Office 365 n'efu na ngwaọrụ ọ bụla
Office bụ ezigbo ihe ngwọta maka ndị ọrụ ahụ ha enweghị ọtụtụ mkpa mgbe ị na-ekepụta akwụkwọ. Ngwa dị maka nbudata na Storelọ Ahịa Microsoft site na nke a njikọ. Anyị enweghị ike ibudata ụdị nke Excel belata, mana anyị ga-etinye ngwa niile, ngwa nke na-enye anyị ohere ịnweta OneDrive, Skype, kalenda ...
Microsoft Office: Dezie & Kekọrịta
Excel site na ihe nchọgharị
Microsoft na-enye anyị ohere iji Office nke ngwa site na ihe nchọgharị anyị, ọkachasị site na akaụntụ Outlook anyị, Hotmail ... versiondị web dị site na akaụntụ Microsoft anyị, Ọ na-enye anyị otu ọrụ na njedebe anyị nwere ike ịchọta na ngwa Office nke m kwuru na paragraf gara aga.
Ọ bụrụ n'ịchọghị itinye ngwa a na kọmpụta gị, n'ihi na ojiji ị ga-enye ya dị oke mma, ịnwere ike iji Office site na ntanetị ịnweta akaụntụ email gị. Versiondị weebụ ahụ na-enye anyị ohere ịnweta faịlụ ndị anyị debere na draịvụ ike anyị, ọ bụghị naanị ndị dị site na OneDrive.
Akwụkwọ ozi Google
Google tinyere n'aka anyị, site na Google Drive, ụzọ atọ ndị ọzọ na-atọ ụtọ na Okwu, Excel na PowerPoint, e mere ha baptizim n'ụzọ enweghị usoro dịka Akwụkwọ Ederede, Akwụkwọ Ntanetị na Ntinye. Ngwa ndị a niile rụọ ọrụ naanị site na ihe nchọgharị site na ebe nrụọrụ weebụ Google Drive, ha dị kpam kpam n'efu.
El ọnụ ọgụgụ nke nhọrọ dị dị obereOtú ọ dị, ọ bụrụ na anyị nwere ụfọdụ na-akpali ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka ekwe omume nke mepụta tebụl pivot, wedaa ndepụta… Naanị otu onye na-enye anyị ọrụ a bụ nke ahụ, nke bụ ọrụ ọ bụghị ngwa anyị nwere ike ibudata na-arụ ọrụ na-enweghị njikọ intaneti.
Oflọ ọrụ maka ịmepụta akwụkwọ Google, kwa dị maka ekwentị mkpanaaka (iOS na gam akporo). Ọ bụrụ na mkpa gị bụ isi, iji mee usoro anọ dị mfe na obere ihe ọzọ, Google Sheets bụ otu n'ime ngwọta kacha mma dị na ahịa dị maka desktọọpụ na nyiwe ekwentị niile.
Ọnụ Ọgụgụ (Mac)
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ngwa maka Windows, ọnụọgụ ahụ dị oke elu, mgbe anyị na-achọ ihe ndị ọzọ, anyị ga-eleba anya na gburugburu Apple's macOS ecosystem, ebe ọ bụ na, dị ka Microsoft, Apple na-enye anyị a set nke free ngwa n'ime iWork ngwugwu.
Ọnụ Ọgụgụ bụ kpamkpam free ọzọ na Apple na-eme ka ndị ọrụ niile nwere ngwaọrụ ọ bụla nwee ya. Ngwa a dịkwa maka ngwaọrụ mkpanaka, yabụ anyị nwere ike ịme otu tebụl ma jiri otu ọrụ site na ama / mbadamba ma ọ bụ site na Mac anyị.
Onu ogugu nke onu ogugu ndi Onu ogugu na-enye anyi adighi elu dika nke nke Excel, n’agbanyeghi, ya na mmelite ohuru obula, Apple na ewebata njirimara ohuru nke nta nke nta, ha emewo ngwa a ka ọ bụrụ ihe ọzọ dị irè maka Excel n'ime usoro okike Mac.
Ntọala nke ngwa anyị nwere n'aka anyị site na LibreOffice bụ nke mebere Onye edemede, Calc, Mmetụta, Bịaruo, Math ... Calc bụ ihe ọzọ emere n'efu nke LibreOffice na-enye, ọnụ ọgụgụ nke ngwa ngwa mepere emepe n'efu n'efu maka Windows yana maka macOS na Linux. Banyere ndakọrịta, LibreOffice Calc zuru oke dakọtara na faịlụ .xls na .xlsx.
Onu ogugu oru anyi nwere n'aka anyi site na LibreOffice di elu ma o nweghi ihe nwere anyaụfụ na Excel, ma ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na anyị ezubeghị iji usoro ndị karịrị ike ọtụtụ mmadụ. Ebumnuche nke ngwa a dị nnọọ ka ihe anyị nwere ike ịchọta afọ ole na ole gara aga na Excel, yana interface gaferela maka oge ugbu a nke na-anaghị ewepụ ọrụ ya.
Ezie na ọ bụ eziokwu na LibreOffice dị maka gị budata n'efu, ọ bụghị otú ahụ na nsụgharị maka ngwaọrụ mkpanakaEbe ọ bụ na e nwere ụdị ngwa ahụ na ndị dị adị, ha anaghị enwere onwe ha.
OpenOffice na LibreOffice na mbido amuru ha site n'otu oru, ma n'ihi ọdịiche dị na oru ahụ, ha kewara ụzọ ha na-agbaso otu isi mmalite ihe ọmụma. Ngwa ndị OpenOffice na-enye anyị, bụ otu ihe anyị nwere ike ịchọta na LibreOffice, yana ọnụọgụ ọrụ dị.
Usoro ngwa niile nke bụ akụkụ nke OpenOffice bụ dị maka nbudata n'efu site na nke a njikọ. Anyị enweghị ike ibudata naanị Calc, mana anyị nwere ibudata usoro niile nke ngwa, ee ma ọ bụ ee.
Gnumeric bụ ngwa iji mepụta akwụkwọ ntanetị nke Linux meghere emeghe isi. Gnumeric dakọtara na usoro mgbasa ozi niile na ahịa, gụnyere nkwado maka Lotus 1-2-3. Ọ na-eji usoro XLM eme ihe ka anyị nwee ike ibupụ akwụkwọ ndị emere na HTML ma ọ bụ ederede nkewapụrụ iche.
Ọ bụrụ na-amasị gị emeghe iyi software ma achọghị ịwụnye niile ngwa na-akụkụ nke OpenOffice ma ọ bụ LibreOffice, Gnumeric bụ otu magburu onwe ya ma ọ bụrụ na iji mpaghara desktọọpụ GNOME na Linux, Unix ma ọ bụ GNU na nkwekọrịta. Agbanyeghị na ewepụtara ụdị maka Windows afọ ole na ole gara aga, ọ gbahapụrụ ya obere oge, yabụ ọ dị maka ọnọdụ GNOME.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Autlọ ọrụ akpaaka » Microsoft Excel » Ihe kacha mma Excel n'efu
10 kacha mma saịtị na-ege ntị music free
Esi emeghe faịlụ json